Shadow in the Cloud (2020) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 4.6/10 5533 votes
ဒုတိယ ကမ်ဘာစဈအတှငျး မုနျတိုငျးထနျတဲ့ ညတဈည၊ပြံတကျလုဆဲဆဲ ဗုံးကွဲလယောဉျတဈစငျးပျေါကို ထိပျတနျးလြှို့ဝှကျကုနျစညျတဈမြိုးသယျဆောငျလာတဲ့အမြိုးသမီးလယောဉျမှူးတဈယောကျ တကျလာခဲ့တယျ။
လယောဉျပျေါက အမြိုးသားတပျဖှဲ့ဝငျတှဟော အထောကျအထားတှရေော သူတို့ကွောကျရတဲ့နာမညျဆိုးနဲ့အထကျလူကွီးကွောငျ့သာ လကျခံလိုကျရပမေယျ့ အငျတငျတငျဖွဈရုံမက သူ့အပျေါ ရိုငျးရိုငျးပပြဆြကျဆံတယျ။
ဒါပမေယျ့ သူနဲ့ စကားတှပွေောရငျး ဖလှယျရငျး ဒီအမြိုးသမီးနဲ့ ဒီကုနျစညျအပျေါကိုသံသယတှကွေီးထှားလာပွီး အမှောငျထဲကတိမျတှကွေားထဲ အရိပျတဈခုကိုမွငျလိုကျကွရတဲ့အခါမှာတော့? အဲ့ဒါ ရနျသူ ဂပြနျလယောဉျတှဖွေဈမလား? ဒါမှမဟုတျလယောဉျကွုံလိုကျတဲ့ မိနျးမကွောငျ့ဖွဈမလား?
စဈအတှငျးကာလ အကျရှငျ နဲ့ အရငျတုနျးက နာမညျကြျော gremlins မှငျစာတှနေဲ့Horror ကိုရောမှထေားတဲ့ကားပါပဲ။ ဇာတျအစကနေ ပြိုးလာတဲ့ သိခငျြစိတျကိုအဆုံးထိဆှဲချေါနိုငျသလို အထူးပွုလုပျခကျြတှလေဲသပျရပျလှပပါတယျ။
မတှရေ့တာကွာပွီဖွဈတဲ့ အားလုံးရဲ့ အသညျးကြျောလေး Chloë Grace Moretz ကိုဇာတျအစကနအေဆုံးထိတောကျလြှောကျမွငျတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း မုန်တိုင်းထန်တဲ့ ညတစ်ည၊ပျံတက်လုဆဲဆဲ ဗုံးကြဲလေယာဉ်တစ်စင်းပေါ်ကို ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ကုန်စည်တစ်မျိုးသယ်ဆောင်လာတဲ့အမျိုးသမီးလေယာဉ်မှူးတစ်ယောက် တက်လာခဲ့တယ်။
လေယာဉ်ပေါ်က အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အထောက်အထားတွေရော သူတို့ကြောက်ရတဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့အထက်လူကြီးကြောင့်သာ လက်ခံလိုက်ရပေမယ့် အင်တင်တင်ဖြစ်ရုံမက သူ့အပေါ် ရိုင်းရိုင်းပျပျဆက်ဆံတယ်။
ဒါပေမယ့် သူနဲ့ စကားတွေပြောရင်း ဖလှယ်ရင်း ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ ဒီကုန်စည်အပေါ်ကိုသံသယတွေကြီးထွားလာပြီး အမှောင်ထဲကတိမ်တွေကြားထဲ အရိပ်တစ်ခုကိုမြင်လိုက်ကြရတဲ့အခါမှာတော့? အဲ့ဒါ ရန်သူ ဂျပန်လေယာဉ်တွေဖြစ်မလား? ဒါမှမဟုတ်လေယာဉ်ကြုံလိုက်တဲ့ မိန်းမကြောင့်ဖြစ်မလား?
စစ်အတွင်းကာလ အက်ရှင် နဲ့ အရင်တုန်းက နာမည်ကျော် gremlins မှင်စာတွေနဲ့Horror ကိုရောမွှေထားတဲ့ကားပါပဲ။ ဇာတ်အစကနေ ပျိုးလာတဲ့ သိချင်စိတ်ကိုအဆုံးထိဆွဲခေါ်နိုင်သလို အထူးပြုလုပ်ချက်တွေလဲသပ်ရပ်လှပပါတယ်။
မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ အားလုံးရဲ့ အသည်းကျော်လေး Chloë Grace Moretz ကိုဇာတ်အစကနေအဆုံးထိတောက်လျှောက်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Option 1 server.mfile.cloud 393 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 393 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 393 MB SD (480p)
Option4server.mfile.cloud 978 MB HD (1080p)
Option5sharer.pw 978 MB HD (1080p)
Option6yuudrive.me 978 MB HD (1080p)
Option7megaup.net 978 MB HD (1080p)